दैनिक पच्चीस सय बढीको बनभोजस्थल बन्दै दोमुखा « Loktantrapost
दैनिक पच्चीस सय बढीको बनभोजस्थल बन्दै दोमुखा
भद्रपुर । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–१० मा रहेको दोमुखा धार्मिक तथा पर्यटकीय विकास क्षेत्रमा दैनिक बनभोज खानका लागि दुई हजार ५०० बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेका छन् ।
इलामको महमाई नगरपालिकासँग सिमा जोडिएको यस क्षेत्रमा देखिने हरिया चुरे पहाडहरु, कनकाई नदीको ड्यामबाट झरेको पानी, नदी किनारमा रहेको समथल भूभागमा बनाएको कृत्रिम पार्क नै पर्यटकका लागि थप आकर्षणका केन्द्र हुन् ।
विशेष गरी मंसिर, पुस, माघ र फागुन महिना बनभोजको महिना भएको हुँदा दैनिक आन्तरिक तथा बाह्य गरी दुई हजार पाँच सय पर्यटक आउने गरेको दोमुखा धार्मिक तथा पर्यटकीय विकास क्षेत्रका अध्यक्ष धनबहादुर लावतीले बताए ।
उनका अनुसार सो क्षेत्रमा तीन प्रकारका वनभोज स्थलहरू रहेका छन् । भिआइपी, टहरा भएको र खुल्ला स्थल रहेका छन् । भेलेन्टाइन पार्कभित्र रहेको भिआईपी स्थानमा वनभोज खानका लागि रू दुई हजार ५००, तिर्नु पर्ने हुन्छ । जहाँ विजुली वत्ती, स्टेज, कुर्सी, टेवल, पानी, शौचालयलगायत सुविधा रहेको छ । उहाँले संघ, संस्था, सहकारी र भारतको दार्र्जेलिङ, सिलगुढी, सिक्किमबाट आउने पर्यटकहरूले भिआईपी स्थान रोज्ने गरेको बताए । टहरा भएको स्थानमा रू. ५०० र खुल्ला क्षेत्र रूचाउनेलाई रू. ३०० लिइने गरेको छ ।
तस्वीरः शिशिर चौलागाईं
चिल्ड्रेन पार्क र भेलेन्टाइन पार्कमा रू २० रूपैयाँ मात्र शुल्क लाग्ने गरेको छ । त्यसदेखि बाहेक आन्तरिक आम्दानीको स्रोत भनेको गाडी पार्किङ हुने गरेको दोमुखा धार्मिक तथा पर्यटकीय विकास क्षेत्रको कार्यालय व्यवस्थापक सुरज थापाले बताए । उनका अनुसार मोटरसाइकलको रु. १०, कारको रु. ५० र बसको रु. १०० का दरले राजस्व लिइने गरेको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको माइधार चोकबाट करिब चार किलोमिटर उत्तर रहेको सो क्षेत्रमा नगरभित्रकै सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न होटलसहित ठूला साना गरी आधा दर्जन होटलहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । जुन होटलहरुमा कनकाई नदीमा पाइने माछा, घुँगी, गँगटाहरु समेत पाइने गरेको छ ।
झापाका अन्य पर्यटकीय क्षेत्र भन्दा पृथक रहेको सललल बग्ने कनकाई नदी किनारमा रहेको यस सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्रको पर्यापर्यटन विकासका लागि थप पूवधार निर्माण गर्न संघीय र स्थानीय सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा रु.४०–४० लाख रकम विनियोजन गरेका छन् ।
रु. २३ करोड लगानीमा सो क्षेत्रको पर्यापर्यटन पूर्वाधार विकास गरिने गुरुयोजना निर्माण गरिरहेको कार्यालयका व्यवस्थापक थापाले बताउनुभयो । उहाँले दोमुखामा बहुल सांस्कृतिक उद्यान भएको पार्क निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति समेत बनाइसकेको बताउनुभयो । सो पार्कमा जिल्लामा रहेका विभिन्न जातजातिका पहिचान झल्कने सामाग्रीहरु राखिने छ ।
नदीकै काखमा रहेको यस क्षेत्रमा फिसिङ गर्न चाहनेहरुका लागि व्यवस्था गर्न सक्ने हो यसले जिल्लामै छुट्टै पहिचान बनाएर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सक्ने अध्यक्ष लावतीको भनाई छ । ‘योजना बनाइरहेका छौ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आगामी बर्षभित्रमा त्यहाँ आउने पर्यटकलाई फिसिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं ।’–––